Fironana, fanamby ary fahombiazana amin'ny automatisation | Martech Zone
Holger Schulze sy ny blaogy All Technology Marketing nanao fanadihadiana momba ny mpivarotra B2B ao amin'ny B2B Community Marketing Community ao amin'ny LinkedIn.
Nanontaniako Troy Burk, CEO an'ny Right On Interactive - a sehatra marketing automatique izay no fantatra ho mpitarika eo amin'ny sehatry ny indostria - hanomezana valiny momba ny valin'ny fanadihadiana.
Vita soa aman-tsara ny fanadihadiana ary manome metrika tsara momba ny fomba hampiasan'ny vondron'ny mpivarotra B2B marketing automatique. Kudos ho an'i Holger sy ny ekipa niara-nisintona an'io. Amin'ireo valinteny 909, ny ankamaroan'ny mpamaly dia avy amin'ny indostria rindrambaiko, teknolojia avo lenta ary marketing misy mpiasa latsaky ny 100. Ho an'ireo orinasa tafiditra ao amin'ity sokajy ity dia nahita fironana, sakana ary tanjona mitovy amin'izany izahay. Ireo orinasa ireo dia miasa mafy hahazoana mpanjifa vaovao, haingana araka izay tratra, miaraka amina tetibola voafetra hiasa. Ny ankabeazany dia mifantoka amin'ny famolavolana, ny vidiny dia zava-dehibe ary ny fandrefesana ny ROI dia indrisy fa valin'ny fampielezan-kevitra (manokatra sy tsindry-thrus).
Ny Marketing Automation vita tsara dia mitovy amin'ny fiverenana ara-bola bebe kokoa, ny fifandraisana mirona bebe kokoa, ny fanatsarana ny fahombiazan'ny anatiny, ary ny famoronana traikefa mpanjifa mifandraika sy manome valisoa.
Ankoatr'izay, nilaza i Troy fa na ireo mpandray dia niresaka tetibola nandritra ny fanadihadiana saingy ny antsasany mahery, 57%, dia nandrefy ny fahombiazany tamin'ny fisokafana sy tsindrio ny taha. Mifanindran-dalana amin'izany, 37% no nilaza fa ny tetibola no faneriterena lehibe indrindra ary antenaina hahitana vahaolana lafo kokoa. Mampametra-panontaniana ny hoe raha toa ka mandrefy tsara ny sehatry ny automatisation marketing ny mpivarotra na tsia. Tsy tokony refesinao arakaraka ny vidiny ny sehatra marketing… tokony refesinao ny fampiasam-bola automatique marketing mifototra amin'ny fiverenana!
Fehiny manjavozavo izany: Ny mpandray dia maniry fitarihana bebe kokoa, vahaolana automatique marketing tsy lafo, miaraka amin'ny teti-bola fisaka na mihena ho an'ny automatisation marketing. Ary mandrefy ny fahombiazana amin'ny taha naoty misokatra sy tsindry izy ireo.
Tags: b2bb2b marketingautomation marketingvidin'ny automatisation marketingfampiasam-bola automatique marketingvidin'ny automatisation marketingfiverenana amin'ny fampiasam-bolafiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketingmahitsy amin'ny interactivetroy burk